U Gabara Deegaan Dhan | Qeybta 13aad Burhaan Burhaan - Ceelhuur Online
Home > SHEEKOOYIN > U Gabara Deegaan Dhan | Qeybta 13aad Burhaan Burhaan
March 30, 2018 admin1445
“Aabe gabadha waa ina Jaamac Sandhool, Jaamac Shandhoolkii aan…”
“War Jaamac Sandhool wan aqaane, caruurtiisa wax ku le’egba laguma arkee..”.
“Aabe waa lagu arkaa, adiga kooxda waa weyn baad taqaannaa kaliya. Gabar baa jirta reerka u yar, oo hadeer uun madaxa keentay”
“Warka waa dhanyahay. Insha Allah waan wacayaa Jaamac, Jimcahaanna in aan u tagno baan isku dayayaa, haddii ay macquul tahay.”
“Aad baad u mahadsantahay aabe”.
Culays weyn baa ka dhacay Ciise. Farxad buu meel uu is geeyo weysanyahay.
Muno in uu heli doonana aad buu u hubaa maadaama aabihiis, oo magaalada mansab iyo magacba ku leh, Ree Sandhoolna ay aad isugu dhawyihiin, uu hawshiisa galayo.
Kalsoonida uu qabo aroos digis buuba bilaabay. Hoolasha iyo hoteelada magaalada aroosyadeeda lagu dhigana wuu wada wacay, qaarkii la qumanaadayna wuxuu u sheegay in uu Qamiista u tagi doono si uu indhisiisa ugu soo arko adeegga ay hayaan.
Dadkii ugu horeeyay ee uu wacay waxaa ka mid ahaa Ugaas. Meesha ay arintu marayso buu aad ugu sharaxay, una sheegay in uu malxiis noqonayo lagana rabo in uu saliidda iska soo kala yareeyo, haddii kale aanan loo ogolaan doonin in uu hoolka arooska lugta galiyo.
Inta Ciise uu Ugaas farxaddiisa la wadaagayo, Ugaasna wuxuu u qamandhuucaa sidii nin meyd loo soo sheegay. Ugaas markiiba waxaa hortiisa kasii muuqday, Yuusuf oo Muno waayay, Shamsana ay Yuusuf heshay.
Usbuucaan intii ay Shamso niyad jabsanayd, buu usoo dhuuntay, oo dhowr jeer taleefanka kala hadlay. Welwelka iyo niyad jabka haystay buu ka faaiideystay, dareensiiyayna in aanan la nicin oo qof jecel uu jiro. Shamso, iyadoo jabkii Yuusuf kasoo raacay xanuunkiisa wali dareemaysa bay is tiri adna qof kale sidaas oo kale ha u xanuujin, oo Ugaas ooy waligeed haruufi jirtay bilawday in ay hadaladda u dabciso.
Janaraal Jimcaale Wacays sidii ay uga soo tagtayba, Muraayo reerkooda iyadaa hooyo u ahayd. Aabeheed xoriyad buuxda buu siiyay, iyana iyadoo laba sano hoos u dhacday bay fasalka koowaad ee dugsiga sare hadeer dhigataa. Waxaa ka go’an in ay waxbarashadeeda dhamaysato.
Gabdhaha fasalkeeda dhigta ee iyada ka wada yar, una arka in ay hooyo weyn tahay, maadaama laba jeer lasoo furay, caydooda iyo juqajuqeyntooda dheg jalaq uma siiso, markii ay ka badbadshaanse, hadallo ay ceebsadaan bay ku tiraah, oo iyagoo xishood wajigu ka fiiqmay bay ka aamusaan. Si aysan mar danbe u hawaysanna macalimiinta nimanka ah hortooda bay ku ceebeysataa.
Kaaba Galaasadda, Qadro, oo malaha warbadi iyo gunuunac dartiis kaaba galaas looga dhigay, bay maaro isaga waysay sannad dugsiyeedkaan billawgiisii. Markii ay inta dhowr jeer gees ula baxday, in ay nabad galisa u sheegtay, iyana in ay deyso iska dhaafe, wixii ay is yiraahdeen ay gabdhihii kale u sheegeyso, gabdhuhuna waa kuwa Kaaba Galaasadda u rigeysane, ay inta Muraayo dhankeeda hadba soo eegaan, oo iyagoo hadal hoosta isaga sheegaya qoslayaan, markii banaanka loo baxana inta dhankeeda candhuuf u soo tufaan indhaha u kala gadinayaan, bay qorshe u dagtay ay ku nabad galisay.
Macalimiinta nimanka ah midka u yar, ee inta badan gabdhaha hadallo shukaansi u eg ku rid rida, markuu inta soo galay, sabuuradda bilaabay in uu taariikhda maanta ku qoro, bay Muraayo lasoo booday, “Qadrooy, Macalin Fitaax miyuu ahaa midkii aad lahayd, xabadkiisa timaha leh baan jeclahay, mise macalin kale baad ka hadlaysay?”.
Qadro iyadoo loo wada jeedo bay ceeb la ooysay, “balaayo kugu dhacday been banadaa!” bay ku celcelisay, oo inta boorsadeedii qaadatayna banaanka fadhiisatay inta xiisaddu ka dhamaanaysay. Maalinkaas wixii ka danbeeyay qof Muraayo faduul iska daaye, dhankeeda soo eegay ma jirin.
Hal usbuuc markii ay taleefan ku raadinaysay bay Cali heshay. Markuu taleefankoodii uu garanayay ka qaban waayay, bay taleefanka cid daris la ah ka wacday.
“Cali, seetahay aboowe, iga raali noqo, haddii aan ku dhibay, ku tala galkaygu ma ahayn in aan dhuunta kuu galo. In aan ku hadlo kaliya baan rabay”.
“Waan fiicanahay. Dhib malahan, ee maxaad iga rabtay?”.
“Aboowe, guri islaameed baan joogaaye, macquul ma tahay in aan is aragno, oo si fiican aan u sheekeysanno, waad ogtohoo taleefan sidiisaba waxba laguma dhamaysan karee?”.
“Abaayo, waan ka xumahay aad baan mashquul u ahay, mana soo bixi karo mar ay noqotaba”.
“Haye aboowe raali noqo. Waana ka xumahay intii aan waqti kaa qaaday” bay tiri Muraayo iyadoo sida qof fekeraya indhaha ka mirigsiinaysa, taleefankiina isi saartay.
Galabta Cali waa ku hungowday, oo qaab ay ku gasho, sheekana ku bilowdo bay weysay. Isna horana uma aqoon, halkii galab uu arkana buuqeeda iyo indha adeegeeda buusan ka helin. Raadinta ay isaga soo raadisayna, malaha xiisihii ay gabari lahaan lahayd bay ka qaadeen.
In aysan sidaas uga harin bay Muraayo go’aansatay, oo usoo dad badsato. Waxay aaminsantahay in haddii ay heli lahayd fursad ay kula sheekeysato isagoo hor fadhiya, ay fekerkiisa badali lahayd.
Sidii ay Muno isku fahmeen, oo Kaxandhaale looga soo laabtayba, Yuusuf wuxuu bilaabay in uu xoogga saaro aqriska iyo diyaarinta casharada iskoolka. Waa sannadkii ugu danbeeyay ee dugsiga sare. Si uu jaamacad fiican u helo wuxuu ku qasbanyahay in uu si heer sare ah ugu baaso imtixaanaadka sannadkaan.
Hadduusan Muno taleefan kula sheekeysanayn, ama inta gurigoodii tago uusan waqti lasoo qaadanayn, Yuusuf wax buu aqrinayaa, oo qolkiisa ayuu ku jiraa.
Gurigooda, Yuusuf iyo Adeer Cali baa ka jira dad kaligood midkiiba qol daganyahay. Oo caruurta intooda kale, labadii qofoodba hal qol bay leeyihiin.
Yuusuf qolkiisu aad uma weyna, laakiin sida uu u nidaamiyay baa u ekeysiinaysa qol weyn.
Qolkiisa waxaa dhex yaalla sariir hal nafar ah. Miis iyo kursi baa daaqadda hoos yaalla. Katabaan baa qolka gees ka taagan. Armaajo dheer baa u taalla uu dhexdana shaararka ka sur surto, hoostana ku leh qaanado uu dharka laalaaban gashto. Sariirta waxaa ku hoos jirta boorso uu dharka uu inta badan gashto kusoo dhawaysto.
Miiska waxaa gees ka saaran laambad dhuun dheer leh ee hadba meel loo jeedin karo. Dhowr buug baa geeska kale is dul saaran, oo sidii in ay bidayaan iyagood moodo in laga baqayo baa kalkuleetar uu markasta buugaagta korka ka saaranyahay.
Buugaagta iyo laambada waxaa dhex yaalla raadiye weyn oo laba sameecadle ah. Raadiyaha maalinkii oo dhan idaacado baa ka daaran, uu batari u isticmaalo. Galinka danbe markii ay korontadu soo dhacdana, cajaladaha ka buuxa santuuqa miiska ku hoos jira, buu mid ba mar gashtaa, oo raadiyaha oo gaabsan buu wax sidaa u aqristaa.
Saakay markii uu soo kacay buu xasuustay in Muno oo ay galabta oo Qamiis ah balansanyihiin, uusan aqoon goobta iyo goorta ay ballameen. Wuxuu rabaa in uu waco, laakiin taleefanka reerkooda oo halaysan buu saaka soo kacay. Markuu sidaan oo kale u halaabana, shirkadda taleefanada in ay qof usoo diraan waxay ku qaadataa ugu yaraan saddex maalmood.
Yuusuf waa ku qasbanyahay in reerka ay dariska yihiin uu taleefankooda soo isticmaalo, laakiin odaga reerka, Cabdulle, ee inta badan taleefanku isaga ag yaallo buu aad u necebyahay in uu sheeko u bilaabo.
Cabdulle waa oday malaha dhowr iyo lixdan jir ah, ma shaqeeyo isagu oo gabar uu dhalay oo Holan jirta baa soo biisha. Cabdulle hadal haduu bilaabo, mar dhaw ma joojiyo. Taa waxaa ka daran, isagoo hadlaya baad moodaa in hadalkiisu hadal kale uu xasuusinayo, markaasuu moowduuc hor leh, hadba afka saaraa.
Yuusuf oo intaas og, dhowr jeer uu inta ku sirmana meela uu u socday ka daahay, baa markaan ku talo gashan in uu inta taleefanka wacdo, iska soo dhaqaajiyo odagu hadduu doono ha iska daldalmee.
Yuusuf oo si isku dadaalinaya, isuna ekeenaya in uu meel aad uga daahsanyahay baa gurigii Cabdulle soo galay. Cabdulle, oo deydka gurigiisa dhex taagan, oo inta weeseestay wajigiisa biyaha ka hoorinaya, macawuustana boodyaha uu isku nabayo qoyaanka kaga ceshanaya, baa lasoo booday, “Yuusuf ahaa, ii waran adeer, waa yahaan kumaba arage, ma magaaladaad ka maqnayd?”. Yuusuf oo og hadduu jawaabo in uu howl madaxa la galay, baa in uu odaga inkiro ay ku adkaatay, oo ku jawaabay, “fiican adeer, waan joogay, wax aqris iyo iskool baan ku mashquul sanaa.”
Adeer Cabdulle sheekadii lagu yaqiinay buu la kala baxay. “Iskool? Maasha Allah! Yuusufow waxaan xasuustaa maalinkii ugu horeeyay ee iskool la i geeyay. Aad baan u baqayay, hooyaday in ay iga tagto waan diidanaa oo markii ay soo dhaqaaqday baan oohin oodda jabsaday. Hoorta oodda gurigeena la hor dhigay ma aragtay? Kuwa waalan baa ood inta soo xamaaleen markii ay gurigeyga ag marayaan inta tubeen iska tagay. Waxaan u malaynayaa in uu yahay wadaadka jiingadda buluugga ah kaligiis dhex fadhiya ee Faaduma Caraale inta is fahmi waayeen ay is furi jireen… Faadumo Caraale waagii ay yarayd Alla Qurux badnaydaa… Horta quruxda maxaa dadku u jecelyihiin adeeroow? Wallaahi dadka quruxda xiiseeya maahi, hadda ka hor hadaad arki lahayd naag aan guursaday foolxumadeeda… Horta naagtaas magaceedu muxuu ahaa? Yuusufow naagtaas waxaa dhalay mid tuuladii aan daganayn taliye booliis ka ahaa… Hadda ka hor waxaan saaxiib ahayn mid booliis ah, nin wuxuu ahaa aad u maskax badan… Yuusufoow ma ogtahay maskaxda bini aadamku inteeda badan lama isticmaalo… Naag aan shukaansan jiray markaan sodon jirka ahaa baa ina Aadam la oran jiray… Hadeer naagtaas mid aan daris ahaan jirnay bay ilma badan u dhashay… Ninku xaasas kaloo badan buu lahaa, naagihiisa mid ka mida, habaryartey odageeda gabar la dhalatay mid daris la ahaan jirtay oo Muumino la oran jiray oo kalkaaliso caafimaad ahayd bay qaraabo dhaw ahaayeen, iskuna shubshuban jireen… Yuusufow waagii hore gabdha badan oo xaafadda dagan baa kalkaaliyooyin caafimaad isbitaaladda magaalada ka ahaan jiray… Gabadhaydha Holan joogta maalin dhawayd isbitaal bay gashay baa la yiri…
Odagu markuu intaas is daba dhigay baa Yuusuf inta dulqaadkii ka dhamaaday taleefankii inta soo jiitay, oo Muno la hadlay, isagoon odaga dhankiisaba mar danbe fiirin albaabka kasoo degay. Yuusuf wuxuu ku dhaartaa odagu in uusan sidaan ku caafimaad qabin, laakiin odaga wax waalan ma ahanoo reer dhan buu aabe u yahay si habsami lehna u dhaqaa. Magaalada dhanna nin, hadal badidiisa maahee, sida kale looga jecelyahay weeye.
Adeer Cali oo guriga hortiisa badeel sita oo carrakaawo ku kabisaya baa u jeeday Yuusuf oo guriga Cabdulle kasoo baxaya, faduushaanna bilaabay “Yuusuf ii waran adeer seetahay? Seetahaydaas baanba ku xasuustaye, madaxii see kuu yahay? Madaxaas baanba ku xasuustaye, madax aad cuntid goormaa kuugu danbeysay? Danbeyntaas baanba ku xasuustaye, gurigii aan isku raaci lahayn intee ku danbeeyay? Gurigaas baanba ku keenaye, maxaad guriga Adeer Cabdulle ka doontay mise sheekaba sheekay dhashaadiisa baad u xiistay?”.
Yuusuf oo la yaaban sida Adeer Cali uu Cabdulle u dhaadhaajiyay baa isagoon istaagin, kuna leh “adeeroow maad qolyaha majaajileestayaasha ku biirtid” gurigoodii dalakh yiri.
Galabta Yuusuf aad buu u faraxsanyahay, sababtoo ah in isaga iyo Muno ay lamaane yihiinna wuu hubaa, balantaanna iyadaa samaysay, oo in uu qasbayo ma dareemayo.
Saakay markuu wacay, waxay ku ballameen in ay Tukaanka Barre isku arkaan labada galabnimo, mase yaqaano sababta loo wirwirayo iyo halka la qaban doono.
Baskii markuu ka dagayba intuusan laamiga soo gooynin buu wuxuu arkay, Barre oo gaari yar ag taagan iyo gabar, uusan markaa qofka ay tahay u jeedin oo tukaanka Barre dhex taagan. Yuusuf wuxuu is leeyahay waa gabdhaha kale ee Muno la dhashay, mana jecla in uu cidda si fiican u barto una dhex galo, inta isaga iyo Muno ay isku cusubyihiin. Sidaas darteed wuxuu damcay in uusan laamiga dhanka tukaanka u gooyne, uu dhanka basku u sii socday sii aado, korkana kala socdo dadka ay yihiin.
Tukaanka gabadha dhex taagan waa Muna, Yuusuf bayna sugaysaa. Waxay aragtaa isagoo inta bas ka dagay u eg qof iska tagay. Inta tukaankii kasoo baxday bay dhankiisii aaday kana daba dhawaaqday “Yuusuf, halkeed aaday?”. Markuu codkeedii aqooday buu isagoo dhoolla cadaynaya, dhankeedii soo aaday, markuu usoo dhawaadayna u sheegay in uu walaaleheed mooday, rabayna in uu kor ka wiideeyo intii ay ka tagayaan.
Inta ku qososhay bay dood yar la gashay, si kaftan ahna u weydiisay iyadoo qof caraysan iska dhigaysa “waryaa reerkeyga in aad baratid ma rabtid miyaa? Ma in aad bannaanada igu heysataad rabtaa?”.
Cabaar markii ay sii kaftameen bay tukaankii soo gaareen. Yuusuf inta markiiba gudbay buu Barre uusan waayahaan arag xabadka galiyay, sheeko yar oo gaaban iyo qosol banaanka laga maqlayay kadib, bay Muno inta soo gashay tiri Yuusuf hadaad Barre u timid iskala sheekeyso, haddii aad aniga ii timidna na keen daahnaye. Yuusuf oonan wali ogayn meesha loo socdo baa inta Barre macsalaameeyay banaanka u baxay.
“Na saar gaariga aboowe” bay Muno tiri iyadoo boorso yar ooy wadatay wax ka baarbaaraysa. Isagoo sunniyaha yaab dartood kor ugu qaadaya buu gaarigii gadaal ka fuulay, inta darawalkii salaamay. Wax yar kadib bay Muno iyana gaarigii soo fuushay iyadoo carafta kasoo karaysa gaarigii dhamaa ay dabooshay.
“Muno, inteen u soconnaa abaayo?”
“Waan kuu sheegi lahaa, laakiin waxaan ka baqayaa in aad daaqadda ka boodid” bay tiri iyagoo markaas Jidka Warshadaha Baar Ubax ka fuulaya. Yuusuf wuu dareemay in magalaadii laga sii baxayo oo jidka dheer ee Shabeellaha Hoose aada cagta la saaray, laakiin wali meel loo socdo ma garan karo, oo dhowr deegaan oo jidkaas ku taalla ama looga leexdo baa jira.
Cabaar markii ay sii kaftameen, idaacadna ay u daarantahay buu Yuusuf ka codsaday darawalka in uu hadduu cajalada wato uu heeso u daaro inta idaacaddaan xayeeysiinta miirana ka damiyo.
Markii heestii u horeysay ay cabaar socotay buu inta Muno kusoo jeestay, aadna ugu soo dhawaaday, indhaheedana si toos ah u eegay heestii la qaaday fannaankii…
Markaad socodka damacdee
Miisaanka lagu darey
Dadku waxay yidhaahdaan
May daarin ciidee
Da’uus la moodyeey
Markaad luqunta dadabtaa
Kolba laygu didayaa
oo layga darayaa
Miraha heesta iyo macaanida codka Yuusuf baa Muno indhaheeda ilma soo joojiyay. Yuusuf oo illintii safaleetigiisa uga tiraya baa si dabacsan u yiri “ha booyin macaanto” wajigana ka dhunkaday. Iyagoo labadooda gacmood ee is xiga is haysta, is daawashana isugu mashquulsan buu Yuusuf ka war helay in ay Afgooye yimaadeen.
Sheekada oo aad ugu socotay, waqtiga uu Muno isagoon laga qasayn gaariga kula soo qaatay, iyo jidka oo aad u wanaagsanaa baa keentay in aysan uba war hayn intii sodon kiiloomitir lasoo jarayay.
Gaarigii wuxuu geeyay guri fillo ah oo aad u qurux badan. Guriga markii gadaashiisa lala laabto waxaa ku taalla beer weyn. Beerta waxaa ka baxaya geedaha canbaha, seytuunka, mooska, liinta, canuuniga, babaayga iyo kuwo kale oo badan sida bariiska iyo digirta.
Beerta waxaa iska leh Muno adeerkeed, furaha ayayna Xamar uga soo qaadatay, rabtaana in ay Yuusuf galabta waqti kula qaadato. Boorso gadaal u saarnayd inta la dagtay bay darawalkii u sheegtay in uu shanta iyo barka galabnimo usoo laabto.
Gurigii bay galeen, oo inta boorsadii furtay Yuusuf usoo bixisay funaanad iyo macawuus cusub oo tiri “kuwaan soo gasho aboowe, aad nafistide”, iyana inta qol gashay soo baxday iyadoo sidata garbasaar labada garab kaliya u saaran oo qoorteedii dheereyd muujinaya, iyo baatigii gashigiisa uu horay Yuusuf ugu jeclaaday. Waa dirac jirkeeda ku jaango’an, oo dhirirkeeda iyo degaandegyada jirkeeda soo saarayaa.
Balbalo raar ka samaysan oo fadhi wiifoow ah uu ku dhex samaysanyahay bay Yuusuf geysay. Qado horay loosii diyaariyayna labadoodii bay usoo qaaday. Markii ay raar dhulka ku goglanaa ku cunteeyeen bay inta alaabtii jikada ku celisay cambe jar jaran horay usoo qaaday, oo labadoodii wiifoowgii ku dul cuneen.
Wixii galabtaas oo dhan la sheekeysto, marna ay mustaqbalkooda wixii ay samayn lahaayeen odorosaan, marna waxbarashadooda ay ka sheekeystaan baa markii danbe la gaaray xilligii ay gaariga ballameen. Inta labisteen bay gaariga beerta ku dhex sugteen.
Muno markii ugu horeysay baad moodaa in ay Yuusuf jacayl dhab ah u qaaday. Indha raxmad leh bay hadba ku eegtaa, marna gacantiisa inta kor usoo qaado bay dhunkataa, isna waa u dhoola cadeeyaa oo “waan ku jeclahay” dhunkashadeedii mahadnaq uga dhigaa.
Gaarigii baa soo istaagay iyagoo labadooda waji daawashadooda ku lunsan, oo kaliya ogaaday in ay gaari sugayeen markii ay hoonkiisa maqleen.
Dhankii Xamar baa lasoo qabtay. Labadoodii kursiga danbe bay fadhiisteen. Muno ayaa timaha Yuusuf oo dhabteeda jiifa billawday in ay ku cayaarto.
Gurigii Muno buu gaarigii geeyay kadib markii Yuusuf gurigiisa oo soo sokeeyay lagu soo tuuray.
Saakay markii ay suuqa kasoo laabatay bay guriga oo cidla ah seexatay. Hal mar bay kusoo toostay buuq iyo qosol hoos ka yeeraya. Muno lama socoto dad imaanaya gurigooda, kumana talo galsana. Hadana sidii dad horay u balansanaa baa hooyadeed iyo aabeheed oo saakay baxay hadalkoodu hoos ka yeerayaa, iyagoo dad ay ku qiyaasayso malaha todobo qofood, “fadhiista” ku haya.
Muno iyadaa reerka gabar u ah, laguna yaqaanaa in ay martida soorto. Si halhaleel ah bay inta biyo isugu shubtay, oo cabaayad isku soo taagtay hoos usoo dagtay.
Jaranjaradii markii ay kasii dagaysay bay isha ku dhufatay Ciise Timajillac oo hoos kursi ku fadhiya iyo aabihiis oo koob shaaha sii kabanaya.
Guddigii aqalka sare ee xalinta khilaafka Barlamaanka oo la kala diray
Baarlamaanka oo su’aalo waydiinaya wasiirada Amniga,duulista hawada iyo taliyaha Booliska
December 8, 2019 Duceysane
Mahad Cilmi Cali oo la wareegay xilka Guddoomiyaha degmadda Waaberi (Sawirro)